I-FAQs -Shanghai Huizhou Industrial Co., Ltd.
Ndinqwenela ukuba yonke imibuzo yakho iphendulwe apha ngezantsi.
Ukuba akukho, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi. Siyavuya ukuba nemibuzo yakho engaphezulu.
Ithini imixholo yomkhenkce?
Isithako esiyintloko (98%) ngamanzi. Eshiyekileyo yipolymer yokufunxa amanzi. Iipolymer ezifunxa amanzi ziqinisa amanzi. Ihlala isetyenziselwa ii-diapers.
Ngaba iziqulatho ezingaphakathi kwepakethi yejeli zinetyhefu?
Imixholo engaphakathi kwiipakethe zethu zejel ayinabungozi nayo Ingxelo ye-Acute Oral Toxicity Report, kodwa ayenzelwanga ukuba isetyenziswe.
Kutheni le nto kufuneka ndithathele ingqalelo iipakethe zeGel Sweat?
Akukho miqulu ye-Sweat Gel efunxa ukufuma ngaloo ndlela ikhusela imveliso ukuba ithunyelwe ukusuka kuxinzelelo olunokwenzeka ngexesha lokuhamba.
Ngaba izitena zihlala zingumkhenkce ixesha elide
Ngokunokwenzeka, kodwa zininzi izinto eziguquguqukayo zokuhambisa ezichonga ubude bexesha isitena okanye ijeli ihlala ifriziwe. Olona ncedo luphambili kwisitena sethu kukukwazi ukwenza izitena ukugcina ubume obungaguquguqukiyo kwaye zingena kwiindawo eziqinileyo.
Ithatha ixesha elingakanani ipakethe yakho yomkhenkce?
Zininzi izinto ezahlukeneyo ezichaphazela ukusebenza kwepakethe yomkhenkce, kubandakanya:
Uhlobo lwepakethe esetyenzisiweyo - umz. Izitena zomkhenkce, akukho mibhobho yomkhenkce, njl.
Imvelaphi kunye nendawo ekuthunyelwa kuyo.
Ixesha elifunekayo kwiphakheji lokuhlala kuluhlu oluthile lobushushu.
Ubuncinci kunye / okanye ubuninzi beemfuno zobushushu ngalo lonke ixesha lokuthunyelwa.
Kuthatha ixesha elingakanani ukubamba ipakethe yejeli?
Ixesha lokumisa iipakethe zejeli lixhomekeke kubungakanani kunye nohlobo lwesikhenkcezisi esisetyenzisiweyo. Iipakethe zomntu ngamnye zinokuma ngumkhenkce ngokukhawuleza njengeyure ezimbalwa. Ubungakanani beepellets bunokuthatha ukuya kwiintsuku ezingama-28.
Ngaba iipakethi zakho zomkhenkce zingasetyenziswa kumalungu omzimba？
Iimveliso zethu ziyilelwe ukuzisa ukubanda kwendawo. Zingasetyenziselwa ukutya kunye namayeza ahambelana nezihlandlo.
Zeziphi iimveliso ukufakelwa kwakho kokugquma kulungele?
Uluhlu lwethu lwezixhobo zokupakisha zigqunyiwe zilungele ukuthunyelwa kwazo zonke iimveliso ezinobushushu. Ezinye zeemveliso kunye nemizi-mveliso esiyikhonzayo ibandakanya:
Ukutya: inyama, iinkuku, intlanzi, itshokholethi, iayisi khrimu, ismoothies, ukutya, imifuno kunye nezityalo, iikiti zokutya, ukutya kwabantwana
Isiselo: iwayini, ibhiya, i-champagne, iijusi (jonga iimveliso zethu zokupakisha ukutya)
Amayeza: i-insulin, amayeza e-IV, iimveliso zegazi, amayeza emfuyo
Imizi-mveliso: Imixube yemichiza, iiarhente zokubopha, izixhobo zokuqonda isifo
Ukucoca kunye nezithambiso: Izicoci, ishampu, intlama yamazinyo, umlomo wokuhlamba
Ndingazikhetha njani ezona mpahla zintle kwiimveliso zam?
Njengoko isicelo ngasinye sokupakisha imveliso esinovakalelo lobushushu sahlukile; Ungajonga iphepha lethu lasekhaya "isisombululo" ukubhekisa kulo, okanye usitsalele umnxeba okanye usithumelele i-imeyile namhlanje ngezindululo ezithile zokukhusela ngokuthembekileyo ukuthunyelwa kwemveliso yakho.
Ngaba ndingayifaka eyam ilogo yenkampani kwiphakheji?
Ewe. Ukuprintwa kwesiko kunye noyilo ziyafumaneka. Ezinye iindleko kunye neendleko ezongezelelweyo zinokusebenza. Umhlobo wakho wentengiso unokubonelela ngolwazi oluthe kratya.
Kuthekani ukuba iimveliso endizithengayo azisebenzi kwisicelo sam？
Sizama konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukwaneliseka kwabathengi nge-100%.
Uninzi lwexesha, sicebisa ukuvavanya iimveliso zethu ngaphambi kokuthenga. Siza kukuvuyela ukunika iisampulu zovavanyo ngaphandle kwentlawulo ukuqinisekisa, kwangaphambili, ukuba ukupakisha kwethu kuya kuhlangabezana neemfuno zesicelo sakho esithile.
Ndingayisebenzisa kwakhona iipakethi zomkhenkce?
Ungazisebenzisa kwakhona iintlobo ezinzima. Awunakho ukusebenzisa kwakhona uhlobo oluthambileyo ukuba iphakheji ikrazukile.
Ndingayilahla njani imiqulu yomkhenkce?
Iindlela zokulahla ziyahluka ngokuxhomekeke kulawulo. Nceda ujonge kwigunya lendawo yakho. Ihlala injalo ngendlela yamanabukeni.